Munaasabad Baroor-Diiqdii ugu Waynayd Caalamka oo Loo Qabtay Nelson Mandela iyo Madaxda 5ta Qaaradood oon u Kala Hadhin. - Cakaara News
Munaasabad Baroor-Diiqdii ugu Waynayd Caalamka oo Loo Qabtay Nelson Mandela iyo Madaxda 5ta Qaaradood oon u Kala Hadhin.
Johannesburg (CakaaraNews)Illaa boqolaal kun oo qof ayaa isugu tagay garoonka ciyaaraha ee FNB ee duleedka magaalada Johannesburg, gaar ahaan xaafadda SOWETO Baroordiiqda Nelson Mandela.
Waxaa Sida Muuqata aaska-Qarniga ee lagu maamuusayo Nelson Mandela Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo sedex madaxweyne oo hore dalkaasi u soo maray, ayaa ka mid ah madaxda ka qeyb-galaysa sidoo kale, illaa ku dhawaad 40 madaxweynayaasha Daalka Afrika ayaa ka qaygali doona.
Wuxuu noqonayaa aaskii Qaran ee adduunka ugu weynaa kadib dhimashadii madaxweynihii hore ee Maraykanka JF kennedy 1963-dii iyo Winston Chachil Ra’isulwasaarihii Britain 1965tii Munaasabadan Baroordiiqda ah ee Geeridii Nelson Mandela oo La aasi doono Dec 15keeda ayaa ay ka hadleen Madaxweyneyaasha madaxweynaha Cuba Raul Castro, madaxweynaha Brazil, iyo madaxweynaha Maraykanka Barack Obama.
Obama ayaa salaamay Raul Castro oo ay si weyn col u yihiin, waxayna noqoneysaa markii ugu horeysey oo ay kulmaan labbo madaxweyne oo Maraykanka iyo Cuba ah, waxaana la fahamsanyahay in talaabadani Obama uu kaga dayanayo Mandela oo la saaxiibey cadawgiisii ugu weynaa FW De Klerk oo isaga xabsiga ku hayay muddo 27 sanno ahayd.
Sidoo kale Waxaa munaasabadda wada joogey madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe iyo Ra’isulwasaarihii hore ee dalka Britain Tony Blair, kuwaasi oo cadawtooyo baddan isu haya, islamarkaasina aanan is arki karin, waxayna noqoneysaa markii ugu horeysey oo ay sidan isugu soo dhawaadaan.
Ka sokoow Baroordiiqdani illaa iyo 54 munaasabadood oo kale ayaa Koonfur Afrika ka dhacaya, sida uu sheegey xisbiga ANC ee talada haya, si dhamaan dadka ay fursad ugu helaan in ay xusaan Mandela.
Habeen hore sawirka Mandela oo laga dhigey if iyo bikaac ayaa lagu shidey buurta weyn ee Table Mountain ee magaalada Cape Town, sawirkaasi oo ay dadka oo dhan arkayeen meelo kala duwan oo Cape Town ka mid ah. Arrintani waxa ay astaan ka tahay sida Mandela uu oga dhex kaahayo nolosha Koonfur Afrika iyo adduunkaba.
15-ka bishani ayaa lagu aasi doonaa magaalada Qunu ee gobolka Eastern Cape, dowlada South Afrika ayaa waxa ay madaxda adduunka ka dalabtay in aysan ka qeybgalin aaskaasi maadaamaa magaaladasi ay tahay mid aad u yar oo aanan dadka wada qaadi karin.